WAR CUSUB: Maxay ka wada hadleen Shariif, Xassan, Cali Mahdi oo ku kulmay Muqdisho?
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya wada hadalo dheer qaatay oo ay caawa iyo galabtay yeesheen sadex Madaxweyne oo horey u soo xukumay Soomaaliya, kuwaas oo kala ah Cali Mahdi Max’ed, Shariif Sheekh Axmed iyo Xassan Sheekh Maxamuud oo kasoo wada jeeda magaalada Muqdisho.
Sadexdan masuul ayaa hadda mucaarad ku ah dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxaana Shariif Sh Axmed iyo Xassan Sheekh Maxamuud ay gurigiisa ku booqdeen Cali Mahdi Maxamed.
Kulanka warar laga helay ayaa sheegaya in ay dhinacyadu ka wada hadleen arrimaha siyaasadeed ee hadda taagan iyo sidii ay u yeelan lahaayeen go`aan ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee waqtigan.
Cali Mahdi ayaa soo bandhigay intii uu kulankan socday bishii hore dhamaadkeeda dhacdooyin dhexmaray isaga iyo Madaxweynaha Soomaaliya, ka dib markii loo diiday in uu maro wado kamid ah magaalada Muqdisho.
Cali ayaa sheegay in uu iska diiday in loo sameeyo kaar Aqoonsi ah oo uu ku maro jidadka caasumada dalka, sidaas oo kale Shariif Sh Axmed ayaa sheegay in loo diiday garoonka Muqdisho in uu ka dhoofo iyo warar dheeraad ah oo kale.
Kulamadan ayaa sii socon doona sidda ay sheegayaan wararku, waxayna sadexdan masuul la kulmi doonaan qaar kamid ah xildhibaanada beeshaas ee baarlamaanka oo ay kala hadli doonaan dhacdooyinkii u dambeeyey ee xagga siyaasadda.
Madaxweynayaashii hore Xassan Sheekh Maxamuud iyo Sharifi Sheekh Axmed ayaa dhawaan laga baajiyey safar ay ku tagi lahaayeen magaalada Kismaayo, kaas oo ay joojisay dawladda Faderaalka Soomaaliya.